Herbicides | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hanaovana kaviar karoty: dingana isan-karazany amin'ny fambolena amin'ny ririnina
Ny loharanom-baovao ho an'ny karazana kavia dia nipoitra tany Tonizia tany am-boalohany, saingy lasa nalaza tany amin'ny firenentsika haingana. Ny sakafo dia tsy miteraka fahasahiranana be, ary saika ny mpivady rehetra mahafantatra ny fomba hanaovana izany. Eritrereto amin'ny an-tsipiriany ireo hevi-dehibe. Ny Caviar avy amin'ny karaoty dia tena ilaina amin'ny vatany.
Fifehezana ny onja, fampiasana ny Roundup
Ny ahi-dratsy dia mitondra fahasahiranana maro ho an'ny zaridaina sy ny zaridaina, indrindra raha tsy manasitrana foana isika. Raha simba be ny habeny na ny ampahany amin'ilay faritany, dia tsy afaka manao izany ianao raha tsy misy simika. Mipoitra ny fanontaniana: ahoana no fomba fitsaboana ny zaridaina amin'ny tsimparifary? Misy mpahay simika maro be noho ny fandrobana ny ahi-dratsy.
Herbicide "Ground": sehatra, sehatr'asa, tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny zava-mahadomelina
Ny fifehezana ny Weed dia fomba fanao isan-taona mahavariana ho an'ny mponina mivahiny. Io adidy io dia manaloka ny fitomboan'ny tsimparifary. Toy ny hoe nodiovina fotsiny ilay faritra, ary lasa tsimparifary ny tsimparifary. Na dia izany aza dia tsy azo atao ny manafoana: ny ahi-maitso dia manala ireo zavatra mahasoa sy ireo singa rehetra avy amin'ny tany, izay manimba ireo zavamaniry.
Fitsipika momba ny fampiasana ny herbicide "Titus"
Isan-taona miaraka amin'ny fahatongavan'ny fotoam-pambolena, ny lohahevitra momba ny herbicides dia mihamatanjaka hatrany. Ny fanaraha-maso tehamaina mahomby dia antoka ho an'ny fanangonam-bokatra manankarena sy avo lenta. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny endriky ny herbicide "Titus" tena mahomby isika, ny sehatra fampiharana, torolàlana amin'ny fanomanana ny fitotoana miasa, ary ny fepetra fiarovana mandritra ny fanitsiana.
"Lontrel-300": torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Ny fifehezan-tsoavaly dia zava-dehibe sy mavesa-danja. Ny kalitao sy ny habetsahan'ny vokatra dia miankina amin'ny fahombiazany. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny iray amin'ireo zava-mahadomelina mahomby indrindra amin'ny fandrendrehana ny tsimparifary - ny lobolida "Lontrel" ary ny torolàlana momba ny fampiasana azy. Ny herbicide "Lontrel-300": ny endriky ny asidra sy ny famoahana azy Ny fambolena fitrandrahana ny herbicide "Lontrel 300" dia clopyralid.
Ahoana ny fampiasana "Agrokiller" hanaisotra ny tsimparifary
Ny fifehezana mihenjana dia mitarika ny mponina amin'ny fahavaratra. Afaka miady amin'ny tsimparifary amin'ny tanana ianao, mandany ny fotoananao sy ny herinao rehetra. Kanefa ny siansa maoderina dia manatsara sy manampy amin'ny fanatanterahana io asa io. Noho izany, noforonina izay manimba zavamaniry tsy ilaina. Famaritana ny zava-mahadomelina Herbicide "Agrokiller" - zava-mahadomelina ho an'ny famotehana ny tsimparifary sy voankazo isan-karazany isan-taona ary ny fahavokarana isan-taona, ary koa ny angady sy ny zavamaniry mandritra ny vanin-taona miposaka.
Ahoana ny fampiasana ny herbicide "Zenkor" hiadiana amin'ny tsimparifary malemy
Isan-taona, ny mpamboly sy ny mpamboly dia miatrika ny zava-misy, amin'ny sehatra hafa ankoatry ny voankazo namboarina, dia manomboka mitombo ny karazana tsimparifary ary mandray ireo sakafo avy amin'ny voa nambolena. Ho an'ny fifehezana ny tavy, noforonina ny herbicides, ny iray amin'izany - ny zava-mahadomelina "Zenkor" - no horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fampiharana ny herbicide "Stomp" amin'ny ady amin'ny tsimparifary
Raha tsy misy ny herbicides, sarotra ny maminavina hetsika amin'ny fambolena maoderina. Nampiasaina handrava ny tsimparifary izy ireo. Ny iray amin'izy ireo, malaza amin'ny tantsaha, dia ny "Stomp" - ny herbicide mahomby izay manimba ny tsimokaretina misy poizina isan-taona sy ny voangory vary amin'ny vokatra ara-barotra maro.
Ahoana ny fomba fampiasana ny "herin'ny fiterahana": fampiasana ny zava-mahadomelina
Herbicide "Prima" - fomba iray mahazatra sy mahomby kokoa amin'ny fiarovana ny vokatra avy amin'ny karazana 160 isan-taona sy tsimok'aretin'ny taona roa amin'ny fianakaviana Dicots. Mampiasaina amin'ny vokatra toy izany: vary, alahelo, orza, orja, sorghoma, varimbazaha. Famoahana sy famaritana momba ny herbicide Azo alaina amin'ny endriky ny emulsion mifantoka amin'ny concentré ao anaty fitahirizana 5 litatra.
Ahoana ny fomba fitsaboana katsaka amin'ny herbicides
Ny katsaka dia vokatra malaza sy notadiavina avy amin'ny tantsaha an-trano. Ny olana manan-danja amin'ny fambolena azy dia fiarovana amin'ny fanakanana ny vokatra. Ny valiny amin'izany dia azo raisina ho fampiasana herbicides. Ny fitsipika fototra momba ny fambolena katsaka Ny maitso ho an'ny fitomboany dia mitaky ny fepetra manaraka: 12-25 ° C temperatures; tsy misy latsaky ny 30% ny haavon'ny rivotra; tany pH 5.
Herbicide "Tornado": fomba fampiasana fitaovana ho an'ny fifehezana ny tavy
Isan-taona dia samy miady mafy amin'ny tsimparifary ny zaridaina sy ny zaridaina. Manana fotoana sy ezaka be ity dingana ity. Saingy amin'izao fotoana izao, mihabetsaka hatrany ny fampiofanana manokana dia ampiasaina amin'ny tsimparifary, izay ahafahana manadio haingana sy haingana ny faritra miteraka. Ny iray amin'ireo fitaovana mahomby amin'ity ady ity dia ny "Tornado".
Herbicide "Fabian": famaritana, fomba fampiasana, tahan'ny mpanjifa
Misy akora simika ampiasaina mba hiarovana ny vokatra avy amin'ny tsimparifary. Iray amin'ny fampiasana be indrindra ny herbicide "Fabian". Manoro hevitra isika mba hahalalantsika ny famaritana amin'ny antsipiriany bebe kokoa, ny fandinihana ireo fitsipiky ny fihetsika sy ny fahombiazany. Ny endriky ny vatana sy ny endrika famotsorana Ny zava-mahadomelina dia aseho amin'ny endriky ny granules miparitaka amin'ny rano.
Torohevitra momba ny fikarakarana sy famoronana cypress
Fametrahana tsy miankina ny fanadiovana rano avy hatrany
Ny fitsipika dia miahy ny mimosa ao an-trano
Ahoana ny fomba hanamboarana labiera hametrahana boaty
Dorking ho an'ny karazam-borona - endri-pambolena, famaritana zary
Ahoana ny handrahoana sy ny fomba hanamboarana katsaka kely?
Toeram-pitsaboana aretina (gorkusha)
Nahoana no tsy mijoro ny zaza vao teraka sy ny zanak'olo-taona?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Herbicides